Nezvedu - JIAXING INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.
Tine makore anopfuura gumi echiitiko mumatenga epurasitiki uye emadziro emadziro
JIAXING INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.hwakagadzwa muna 1998 uye ndiye aitungamirira akaigadzira epurasitiki (PVC / FRP / PC) nemakadhibhokisi uye rusvingo ukomba mu China. Mushure memakore gumi ekuvandudza, kambani yedu ine yegore yekugadzira inokwana mamirioni matanhatu emamirimita, uye yanga ichiendeswa kuAsia, Africa, Europe, South America, nezvimwe, uye MuIndia, Cambodia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Mexico vakagamuchira rumbidzo yakawanda, uye vakasvika pagore rekupa chibvumirano.
Kukupa iwe neyakanakisa sevhisi sevhisi
Sehunyanzvi mhinduro mupi, tinogona kunyatso kugadzirisa kupisa-chiratidzo, Acid-ngura, kupenya kwechiedza, kudzivirira mvura kune vatengi vedu. Kunyangwe iri mutengi mutsva kana mutengi wekare, isu tinoshandira zvachose mutengi, semuenzaniso, kana chigadzirwa chacho chine dambudziko, chinotsiviwa mahara, uye garandi yekusingaperi. Parizvino, kutumira kunze kwemwedzi kwasvika mumidziyo makumi mashanu.
Tinogona kupa chigadzirwa chakasiyana siyana senge Synthetic resin padenga tile, PVC padenga jira, Transparent FRP padenga jira, Polycarbonate jira, simbi padenga jira, Sandwich pani, Zvese zvigadzirwa zvinoenderana nemhando dzepasi rose zviyero, izvo zvinogona kushandiswa zvakanyanya muimba yekugara, maindasitiri warehosue, imba yekurima, imba yezuva, greenhouse, zvichingodaro.
Iyo JX brand inoumbwa nekumhanya uye xmitter. Zvazvinoreva: kumhanya mutambo. Kana munhu achimhanya muhupenyu, mushure menguva yakareba yekuunganidza ndipo paanozoona kuti chinhambwe chiri kuenda kure nekure, uye pakupedzisira oenda kumberi neushingi senge xmitter. zvinoreva zvakare kuti basa redu rinogona kungoenderera kumberi uye nekupa vatengi basa risingaperi uye mhando yepamusoro.
Kubva payakatanga, kambani yedu yakaita kukurumidza kusimukira nehunyanzvi hwebhizimusi hwe "hunyanzvi, kugona kutendwa, hunyanzvi uye co-kuhwina zano"! Mukuvimba nechikwata chehunyanzvi, chakasarudzika chigadzirwa dhizaini uye kugona kugona, zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, mhinduro nyowani uye yakazara izere masevhisi, isu tinokwanisa kukupa zvakanyanya mutengo-zvigadzirwa kwauri.